पर्सलाई पछाडि राख्नुहुन्छ ? हुन सक्छन् यी चार खतरनाक समस्याहरू ! | सुदुरपश्चिम खबर
पर्सलाई पछाडि राख्नुहुन्छ ? हुन सक्छन् यी चार खतरनाक समस्याहरू !
पर्सलाई धेरैजसो मानिसले आफ्नो पछाडिको खल्तीमा राख्ने गर्दछन् । यदि तपाईं पनि यस्तै गर्नुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो यो बानी तुरुन्तै हटाउनु पर्नेछ नभए विभिन्न रोगको शिकार हुनुपर्छ । पर्समा हामी पैसाको साटो विभिन्न कार्ड, सिक्का, आइडीलगायतका वस्तु राख्छौं जसले पर्स निकै मोटो बनाउँछ ।
यस्तोमा यदि तपाईंले पछाडिको खल्तीमा यस्ता मोटो पर्स राख्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको शरिरको तल्लो भागको ब्यालेन्स बिगार्ने गर्दछ । त्यसकारण पछाडिको खल्तीमा पर्स राख्दा तपाईंले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपर्छ । के यो सही हो ? मेन्स हेल्थमा एउटा रिपोर्ट छापिएको थियो।
जसमा वटलरु विश्वविद्यालयका स्पाइन बायोमेकानिक्सका प्रोफेसर स्टुआर्ट मैकगिलले बताए अनुसार पर्स भनेको केही समयका लागि मात्र खल्तीमा राख्न बनाइएको हो । उक्त पर्समा कार्ड, विल तथा सिक्का राखेर त्यसमाथि घण्टौंसम्म बसेमा भने हिप, ज्वाइन्ट तथा कम्मरमुनिको भागमा दुखाइ महसुस हुन थाल्छ ।
यस्तो समस्या सियाटिक नर्भबाट सुरु हुन्छ, जुन हिप ज्वाइन्टको ठिक पछाडि रहेको हुन्छ । हिपमा मोटो पर्स राख्नाले पर्स तथा हिपको बीचमा उक्त नसा थिचिन्छ र समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । यो समस्या यस कारण पनि जटिल छ कि हिपबाट सुरु हुने यो समस्या पैतालासम्म पुग्नसक्छ । डा. मैकगेलले ढाडको अध्ययनका लागि एक प्रयोग गरेका थिए, जसमा एउटा हिपको तलपट्टी सानो आकारको पर्स राखिएको थियो ।
अध्ययनका क्रममा उनले पछाडिपट्टी मोटो पर्स राख्नाले पेल्विस (कुहिना) एकतर्फ झुक्ने र यसैका कारण मे’रुदेण्डको ह’ड्डीमा बढी दवाव पर्ने तथ्य फेला पारेका थिए । यसैका कारण हड्डी सीधा हुनुको सट्टा धनुष आकारमा परिवर्तन हुने गर्छ । पर्स जति बढी मोटो हुन्छ, शरीर त्यति नै एकातर्फ झुक्न थाल्छ, र शरीर त्यति नै धेरै दुख्ने गर्छ । तर समस्या के छ भने पर्सलाई अगाडिको खल्तीमा राख्न पनि सकिँदैन, किनभने पर्सलाई अगाडिको खल्तीमा राख्दा पनि उत्ति नै पीडा हुनसक्छ । चिकित्सकहरूका अनुसार मोटो पर्स राख्दैमा मेरुदण्ड वा स्पाइनल कर्ड बाङ्गन्छि भन्ने कुरा सत्य नहुनसक्छ तर पहिलेदेखि नै मेरुदण्डमा समस्या छ भने चाहिँ यसले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
पछाडिको खल्तीमा पर्स राख्दा साच्चै हा’नि हुन्छ त ? यस विषयमा डा. माकगैलले छोटो समयको लागि राख्दा यसले खासै समस्या नगरेपनि लामो समय राख्दा भने पीडा महसुस हुने बताए । त्यस किसिमको पीडा एक ठाउँमा महसुस हुन सुरु गर्छ र ठाउँ ठाउँमा सर्दै जान्छ । कसरी कम गर्ने पीडा ? घुँ’डा मोडेर जमीनमा सुत्ने ।
घुँडालाई तल लैजाँदा दायाँतर्फ मोड्ने र काँध र हिपलाई जमिनमै राखेर दायाँतर्फ लैजाने । यसबाट कम्मरमुनिको भागमा निकै आराम महसुस हुने गर्छ । (जमिनमा सुत्ने, घुँडालाई छातीमा लगाउने र पैतालालाई समाउने । अब कम्मरको माथिल्लो भागलाई समातेर यताउता ढल्कने । यसले ढाडको दुखाइ निकै हदसम्म कम हुने गर्छ ।
यसरी राख्ने पर्स ? (पैसा राख्न क्लिप वा पातलो स्टाइलको पर्स राख्न सकिन्छ, जुन अगाडिको सिटमा पकेटमा राख्न सकियोस् । (साँचोमा जोडेर राख्न सकिने पर्स पनि किन्न सकिन्छ । यस्तो गर्दा जब जब पर्सलाई पछाडिको खल्तीमा राखिन्छ, साँचोले घोच्छ, र बाध्य भएर उक्त पर्स बाहिर राखिन्छ ।
सम्भव भएमा पर्स राख्नै छाड्नु राम्रो हुन्छ । उस्तै परेको खण्डमा प्यान्ट सिलाउँदा प्यान्टको पछाडि खल्ती नै नराख्न सकिन्छ । साइटीका रो’गको सम्भावनाः जब तपाईं पर्सलाई पछाडिको खल्तीमा राखेर बस्नुहुन्छ यसले कम्मरमा द’बाब पार्छ । कम्मरबाटै साइटिक नसा फैलने भएकाले यसको दबाबका कारण तपाईंको कम्मर दुख्ने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
यसले तपाईंको हिप ज्वाइन्ट्समा हुने पिरिफर्म मसल्समा पनि दबाब पर्ने गर्दछ । यसले समस्या पैदा गर्छ । र’क्त संचारमा बाधा पुग्नेः हाम्रो शरीरमा नशाको जालो छ जसले एउटा अंगलाई अर्को अंगसँग जोड्ने गर्दछ । कुनै नशा यस्तो पनि हुन्छन् जुन मु’टु हुँदै कम्मर र खु’ट्टासम्म पुग्ने गर्दछ । मोटो पर्स राखेर बस्दा यी नशामाथि दबाब पर्ने गर्छ जसका कारण र’क्तसंचारमा प्रभाव पर्ने गर्दछ ।
लामो समयसम्म यसरी बस्दा नशा सुन्निन पनि सक्छ । खराब हुनसक्छ मे’रुदण्डको ह’ड्डीः पछाडिको खल्तीमा पर्स हुँदा शरिरको ब्यालेन्स ठिक हुँदैन जसका कारण व्यक्ति सीधा बस्न सक्दैन । यसले मेरुदण्डको ह’ड्डीलाई खराब बनाउँछ जसका कारण स्पाइनल जोइन्ट्स, मसल्स र डिस्क आदीमा पीडा हुन्छ । यसले राम्रोसँग काम गर्न पाउँदैन जसका कारण बिस्तारै मे’रुदण्डसम्बन्धि रो’ग लाग्ने गर्छ ।
फोर्मिस सिन्ड्रोमको ख’तरा बढ्नेः पाइन्टको पछाडिको खल्तीमा पर्स राख्दा तपाईंलाई पायरी फोर्मिस सिन्ड्रोम नामको रो’ग लाग्ने खतरा बढुछ । यस्तो रो’ग लागेपछि बिरामीलाई असह्य पीडा हुन्छ । पर्स राखेर घण्टौं बस्दा पायरी फोर्मिस मसल्समा दबाब पर्ने हुँदा खुट्टामा अत्यधिक पीडा हुने गर्दछ । विशेषगरी युवा यो रोगको शिकार हुन्छन् ।
पायरी फोर्मिस रोगबाट छुटकारा पाउनका लागि शल्यक्रिया गराउनुपर्छ । त्यसकारण तपाईंको यस्तो बानी छ भने तुरुन्त हटाउनुहोस् । (urlabarinews.com बाट साभार)
धुम्रपान सधैका छोड्ने तीन उपायहरू
बैतडीमा फेरि अर्को ट्याक्टर दुर्घटना : चालकको घटना स्थलमै मृत्यु !